စနစ်တကျလေ့လာခြင်း — Steemit
မကြာခဏ "တစ်ခုအသိဉာဏ်နှင့်ထိရောက်သောလမ်းအတွက်လေ့လာနေ" ကိုဆိုလိုတာမှကျောင်းသားများ, မိဘများနှင့်ဆရာ, ဆရာမများကအသုံးပြုတဲ့ထားသောစာပိုဒ်တိုများဖြစ်ပါသည်။
လေ့လာနေ၏အားလုံးကတော့နည်းလမ်းများအသိဉာဏ်သို့မဟုတ်ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လူတန်းစားအတွက်အာရုံစိုက်မထားဘူးသူကိုသို့မဟုတ်အချိန်အပေါ်သူ၏အိမ်စာကိုမပြုသူတစ်ဦးဆက်ဆက်အသိဉာဏ်မဟုတ်ပါဘူး။ သူကထိရောက်စွာသင်ယူမည်မဟုတ်ပေနှင့်သူ၏အတန်းခံရပါလိမ့်မယ်။ ဒီ၏ရလဒ်သည်မိမိရွယ်တူချင်းအတူတက်ထားရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူပုဂ္ဂလိကကျူရှင်အဘို့အသွားရင်တောင်သူကအစဉ်အဆက်မှာအားလုံးမပါလျှင်, ထဖမ်းရန်ကြိုးစားနေစဉ်အမြဲရှိလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်စမတ်လေ့လာနေအကြောင်းကိုပထမဦးဆုံးအရာသင်ခန်းစာပထမဦးဆုံးအတန်းအစား၌ဆုံးမဩဝါဒကိုခံသောအခါလေးရယ်အာရုံစိုက်ဖို့ပါပဲ။ သင့်ရဲ့သင်ယူမှုမြန်ဆန်ထိရောက်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျနားမလညျတစုံတခုကိုမျှလည်းမရှိလျှင်မေးခွန်းများကိုမေးပါ။ ဆရာကိုကူညီကျေနပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အိမ်စာနှင့်တာဝန်ကျတဲ့အချိန်ပေါ်ပြုပါနှင့်သင်အလုပ်၏ backlog ရှိတယ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအစဉျအမွဲနောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာတို့အတွက်အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
တည်းဖြတ်မူစာအုပ်တွေနဲ့လမ်းပြဒီရက် aplenty ဖြစ်ကြသည်။ စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူသူတို့ကိုသုံးပါ။ ဘာသာရပ်တစ်ခုစီအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုတည်းဖြတ်မူစာအုပ်ထားရှိခြင်းသည်ပိုက်ဆံစွန့်ပစ်သည်။ ဒါ့အပြင်သိပ်အများကြီးစာအုပ်တွေထဲကနေလေ့လာသင်ယူသာသင်ရှုပ်ထွေးနှင့်အဖိုးတန်အချိန်ကိုတက်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။
နောက်ဆုံးစာမေးပွဲပုံစံကိုသိသူတို့နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်ယခင်နှစ်ပေါင်း '' မေးခွန်းများကိုကျင့်သုံးပါ။ အမှန်တကယ်စာမေးပွဲငှါလာကြသောအခါ, သင်မေးခွန်းများကိုကိုင်တွယ်ရန်ဘယ်လိုသိပါလိမ့်မယ်။
#smart #study #success
Congratulations @thwinlay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @thwinlay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @thwinlay! You receivedapersonal award!